Sales Agents များထံတွင်, ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ Functions များ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / Sales Agents များထံတွင်, ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ Functions များ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized4မှတ်ချက်များ 1,511 views
ဘဏ္ဍာရေး-န်ဆောင်မှုမြှင့်တင်ရန်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်ပေါင်နှံမှုအတွက်အဖြစ်, ကောက်ခံခြင်း, ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစားသုံးသူနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလမ်းညွှန်မှု.
ရောင်းဂီယာသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ, ပိုင်ဆိုင်မှု, ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်မှုအဖြစ်, သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုစစ်ဆေး.
ဆောင်တတ်၏အကြံပြုချက်အနေဖြင့်အလားအလာဆည်းပူး, မကြာသေးမီစက်မှုဇုန် clients များ, သို့မဟုတ်ဝင်ငွေသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများ.
မျှော်လင့်အတက်အကျနှင့် ပတ်သက်. စျေးဝယ်အကြံပြုကုမ္ပဏီသဘောထားတွေကိုအကဲဖြတ်ရန်.
အခြားအ-လူတွေပြည့်စုံအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေးခြင်းအခိုင်အမာအဘယ်အရာကို active-နားထောင်ခြင်း-ရန်,, ဖန်ဆင်းခံရသည့်အချက်များကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ယူပြီး, သင့်လျော်သောအဖြစ်ကိစ္စရပ်များကိုမေးမြန်းခြင်း, အစားမသင့်လျော်အချိန်များတွင်ကြားဖြတ်ထက်.
ထိထိရောက်ရောက် data တွေကိုဝေမျှဖို့အခြားသူများ chatting-Talking.
critical အတွေးအခေါ်-အသုံးပြုခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်အစားထိုးရွေးချယ်စရာများ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အားနည်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ထင်, ကိစ္စများမှကောက်ချက်သို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
Active ကိုသင်ယူ-အသိပညာတည်ဆဲနှင့်အနာဂတ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့် ပတ်သက်. အသစ်အကြောင်းကိုအချက်အလက်များ၏ဖုံးကွယ်.
မဟာဗျူဟာ-အလုပ်သင်ယူခြင်းနှင့်ပြဿနာညွှန်ကြားချက်သို့မဟုတ်သည့်အခါသစ်ကိုဖြစ်ကြောင်းကိုသင်ယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များများအတွက်သင့်လျော်သော coachingOReducational အလေ့အထများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကောက်နေ.
စောင့်ကြည့်-စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး / စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထိရောက်မှုအကဲဖြတ်, သည်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ, သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကုစားခြေလှမ်းများကိုစဉ်းစားသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ရန်.
othersI အစီအမံစပ်လျဉ်း control-ပြောင်းလဲလုပ်ရပ်များ.
Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-definition လူတွေကိုကူညီဖို့နည်းလမ်းများရှာဖွေနေ.
အဆင့်မြင့်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်-ခွဲခြားရှုပ်ထွေးကိစ္စရပ်များနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ဆနျးစစျအခြားနည်းလမ်းနဲ့ options အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆက်စပ်ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်သုတေသနပြု.
တစ်ဦးစတိုင်ကိုဖန်တီးရန်စစ်ဆင်ရေးအကဲဖြတ်-လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ကို item လိုအပ်ချက်.
တစ်ဦးချင်းစီလိုအပ်ပါတယ်အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း-ပြောင်းခြင်း devices များသို့မဟုတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှနည်းပညာများကို.
Tools များရွေးချယ်ရေး-ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အလုပ် execute မှအလေးအနက်ထားလိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများ၏ကြင်နာ.
အရစ်ကျ-Installing ဝါယာကြိုးများ, devices များ, ထုတ်ကုန်, သို့မဟုတ် packages များယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်တာတွေတွေ့ဆုံရန်.
-ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ရေးသားကွန်ပျူတာ applications များ.
စစ်ဆင်ရေးခြေရာကောက်-Observing အကဲဖြတ်, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာသေချာတစ်ခုပစ္စည်းလက်ရှိတွင်ထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နေသည်ဖြစ်စေ.
စစ်ဆင်ရေးနှင့်စက်ကိရိယာများသို့မဟုတ် tools များ၏ထိန်းချုပ်ရေး-ထိန်းချုပ်ခြင်းစစ်ဆင်ရေး.
အမှားအယွင်းများအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ကမဆိုနှင့် ပတ်သက်. သွားကြဖို့အဘယ်အရာကိုဦးတည်ချက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းများအတွက် troubleshooting-ဖော်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းရင်းများ.
ပြုပြင်တာတွေ-ပြုပြင်ခြင်းဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနည်းလမ်းများအသုံးချဖို့ devices များသို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးကုန်စည်စာမေးပွဲ-ကွပ်မျက်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်, ဖြေရှင်းနည်းများ, သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သို့မဟုတ်ထိရောက်မှုဆိုင်သောနေရာများတွင်.
systems တဲ့စနစ်အခြေအနေများပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ရုံကိုဘယ်လိုသငျ့သညျကိုမည်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-ကိုစူးစမ်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအကျိုးကျေးဇူးများကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ.
သငျ့လျြောသောစက်၏ပစ်မှတ်သို့မဟုတ် performance ကိုမြှင့်တင်ရန်အလေးအနက်ထားလိုအပ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုဖို့နည်းလမ်းများအားသုံးသပ်ခြင်း-ဖော်ထုတ်ခြင်းအစီအမံသို့မဟုတ် system ကိုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆွေမျိုးများ၏ညွှန်ကိန်းများ.
ဒေါ်လာဖျော်ဖြေအလုပ်ရရှိရန်အသုံးလိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုငွေ-ဖော်ထုတ်ခြင်း၏စစ်ဆင်ရေး, ဤအသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်. အရောင်း.
အလုပ်သမားအရင်းအမြစ်-ရည်ရွယ်ချက်ရှေးရှေး၏စီမံခန့်ခွဲမှုသူတို့အနေဖြင့်, လေးလည်း, နှင့် function ကိုလှုံ့ဆျောမှု, အလုပ်အဘို့အထိပ်ရှေးရှေးအဆုံးအဖြတ်.
High School တွင်အဆင့် (GED သို့မဟုတ်မြင့်မားသော-School တွင်ညီမျှသောအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်သို့မဟုတ်)
Link ၏အဆင့် (သို့မဟုတ်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ဇာတ်စင်)
ကျော်လွန်2နှစ်ပေါင်း, နူန်းကျော်ကျော်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအပါအဝင်
အောင်မြင်မှု / စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန – 92.45%
ဇွဲ – 91.65%
စီမံခန့်ခွဲမှု – 87.69%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 94.20%
အခြားသူများနှင့်စပ်လျဉ်းကိစ္စ – 93.53%
လူမှု Alignment – 88.84%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 94.37%
စိတ်ဖိစီးမှုစာနာထောက်ထားရေး – 93.55%
customization / Mobility ကို – 93.13%
တည်ငြိမ်ခြင်း – 97.80%
အသေးစိတ်၏အသိအမြင် – 94.80%
လွတ်လပ်ရေး – 92.80%
တိုးတက်ခြင်း – 87.39%
စဉ်းစား – 88.52%
ဧပြီလ 25, 2019 တွင် 7:20 ညနေ
Certificate (SSC) အကဲဖြတ်. Secondary School Certificate is the complete type of
Pingback: Is Medical Transcription Obtaining Career For You? – ကျွန်မယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏အဖြစ်
Pingback: The Future Hold For Cna Jobs – veg-နက်နဲသောအရာ